DEG DEG+DAAWO:Imaamkii Xaramka Barakaysan oo xabsiga la dhigay & Dowladda Sucuudiga oo wajahaysa xaalad adag hadii…. – Puntlandtimes
DEG DEG+DAAWO:Imaamkii Xaramka Barakaysan oo xabsiga la dhigay & Dowladda Sucuudiga oo wajahaysa xaalad adag hadii….
August 21, 2018 Wariye
RIYAD(P-TIMES)- Ciidamada Booliska dalka Sucuudiga ayaa waxa la sheegay in habeenimadii xalay ahayd ay xabsiga dhigeen Sheekh Saleh Al-Talib oo ahaa imaamkii Xaramka Barakaysan ee magaalada Maka Al-Mukarama. RIIX HALKAN OO KA DAAWO MUUQAALKA
Imaamka ayaa waxaa la sheegay in xalay la qabtay ka hor maalinta munaasibada ciida Carrafo.
Imaamka ayaa waxa uu khudbad uu jeediyay maalinimadii shalay kaga hadlay in dadka Islaamka ahi ay madaxdooda wax u sheegaan isla markaasna aanay ka gaban in ay xaqa iyo runta u sheegaan madaxdooda isla markaasna waxaa loo aanaynayaa xadhigiisa imaamnka hadalka kasoo yeedhay.
Arrintan ayaa kusoo aadaysa iyada oo hoggaamiyaha da’da yar ee waddankaasi Maxamed Bin Salmaan uu aad ugu dirirsan yahay sidii uu awoodda dalkaasi gacantiisa oo kali ah ugu dhigi lahaa, waxaana uu xidh xidhay dad badan.
Xadhigan loo gaystay imaanka Sheekh Saleh Al-Talib ayaa u horseedi karta dowladda Sucuudiga kacdoon xoogan, waxaana ay ahayd dhawaan kadib markii dowladda Canada ay xidhiidhka u jartay Xukuumadda Riyad kadib markii ay magan galyo siisay qoys kasoo hor jeestay siyaasada boqortooyada Sucuudiga taas oo sababtay khilaaf iyo colaad ka dhex dhalatay labada dowladdood ee Sucuudiga iyo Canada.